Fikarohana momba ny firaisana Xenoglossy sy fitazonana ny maha-olona miaraka amin'ny fanahy-Fampidirana - Fikarohana Reincarnation
Xenoglossy dia teny grika midika hoe "lela vahiny" na "fiteny vahiny." Amin'ny fikarohana momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao, xenoglossy dia manondro ny fahafahan'ny olona miteny fiteny iray izay tsy nianarana tamin'ny fomba mahazatra.
Xenoglossy dia heverina fa manome porofo momba ny vatana vaovao indray, satria ny fiteny iray dia tsy maintsy ianarana amin'ny fotoana iray. Raha nisy olona tsy nianatra ny teny vahiny tamin'ny fahatongavan'ny nofo ankehitriny, dia tokony ho nianatra tamin'ny fiteny lasa io fiteny io.
Ian Stevenson, MD namaritana sokajy roa amin'ny xenoglossy:
Amin'izany toe-javatra izany, ny olona iray dia afaka miteny fiteny izay mbola tsy nianarana, fa ny olona tsy afaka mamaly na miresaka.
Amin'ity toe-javatra ity, ny olona iray dia afaka miteny amin'ny fiteny vahiny mbola tsy nianarana ihany koa. Ho fanampin'izany, ity olona ity dia afaka mahatakatra olona miteny ilay fiteny ary afaka mamaly, afaka mandray anjara amin'ny resaka, amin'io fiteny io.
Ian Stevenson dia nanamafy fa raha xenoglossy mamaly dia tokony ho nianatra sy nampihatra ilay fiteny ilay olona tamin'ny fotoana iray. Nasongadin'i Stevenson fa raha te hiresaka amin'ny fiteny iray dia ilaina ny fampiharana.
Raha tsy natao tamin'ny fotoana nitondrana ankehitriny ny fanazaran-tena, dia tsy maintsy nianarana sy nampiharina tamin'ny fiteny teo aloha ilay fiteny.
Miresaka amin'ny fiteny tsy fantatra
Andeha hodinihintsika koa ny fisehoan'ny glossolabia, izay teny ara-tsiansa miresaka amin'ny fiteny tsy fantatra. Ny Glossolabia dia ampiasain'ny sampana sasany amin'ny Kristianisma. Ny miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy mitovy amin'ny xenoglossy satria ilay xenoglossy dia mitaky fahaizana miteny fiteny vahiny fantatra, izay azon'ny olona hafa koa.
Ny fahafahan'ny fanahy hitazona ny fiainana manokana taloha
Amin'ny tranga xenoglossy sasany, voamarika fa ny fiainana taloha dia toa nafindra tamin'ny fotoana avy tamin'ny fahatongavany ho nofo taloha. Ny fiainana taloha dia mety tsy mahalala akory hoe efa maty io. Ny adihevitra hafa momba an'io trangan-javatra io dia hita ao amin'ny: Ireo Fitsipiky ny Fampodiana an-tokantrano
Ny famantarana ny xenoglossy dia misy boaty caption roa, izay maneho ny lahateny na fiteny roa.